Igama lesiqhelo: oxaprozin (inkomo yePRE zin)
Igama lebrand: IDaypro
Iifom zedosi: Ithebhulethi yomlomo (600 mg)
Udidi lweziyobisi: Iziyobisi ezichasayo ezingasebenziyo
NguMedical; Uhlaziywe ngu-Varixcare.cz ngoJan 15, 2021. Ibhalwe nguCerner Multum.
I-Oxaprozin sisiyobisi esichasayo (i-NSAID) esisetyenziselwa ukunyanga iintlungu okanye ukudumba okubangelwa yi-osteoarthritis okanye isifo samathambo kubantu abadala. I-Oxaprozin ikwasetyenziselwa ukunyanga isifo samathambo ebantwaneni abaneminyaka emi-6 ubuncinci ubudala.
I-Oxaprozin inokusetyenziselwa iinjongo ezingadweliswanga kwesi sikhokelo sonyango.
I-Oxaprozin inokunyusa umngcipheko wokubulala ukuhlaselwa yintliziyo okanye ukubetha. Sukusebenzisa i-oxaprozin ngaphambi nje okanye nasemva kotyando lwentliziyo (i-coronary artery bypass graft, okanye i-CABG). I-Oxaprozin inokubangela ukopha esiswini okanye emathunjini, anokubulala.
Ngaphambi kokuba uthathe eli yeza
I-Oxaprozin inokuwonyusa umngcipheko wokuhlaselwa sisifo sentliziyo okanye ukubetha, nokuba awunabungozi. Sukusebenzisa eli yeza ngaphambi nje okanye emva kotyando lwentliziyo.
I-Oxaprozin inokubangela ukopha esiswini okanye emathunjini, anokubulala. Ezi meko zinokwenzeka ngaphandle kwesilumkiso ngelixa usebenzisa i-oxaprozin, ngakumbi kubantu abadala abadala.
Akufanele usebenzise i-oxaprozin ukuba u-aleji kuyo, okanye ukuba unayo:
ukopha okusebenzayo esiswini sakho okanye emathunjini; okanye
Imbali ye umbefu ukuhlaselwa okanye ukuphazamiseka okukhulu emva kokuthatha Iasprini okanye i-NSAID.
isifo sentliziyo, uxinzelelo lwegazi, cholesterol ephezulu , isifo seswekile, okanye ukuba uyatshaya;
isifo sentliziyo, ukubetha, okanye igazi;
izilonda zesisu okanye ukopha;
isibindi okanye isifo sezintso; okanye
ukugcinwa kolwelo .
Ukuba ukhulelwe, akufuneki uthathe i-oxaprozin ngaphandle kokuba ugqirha akuxelele. Ukuthatha i-NSAID kwiiveki ezingama-20 zokukhulelwa kunokubangela iingxaki zentliziyo okanye zezintso emntwaneni ongekazalwa kunye neengxaki ezinokubakho xa ukhulelwe.
Isenokungakhuselekisi ukuncancisa ngelixa usebenzisa eli yeza. Buza ugqirha wakho malunga nayiphi na ingozi.
I-Oxaprozin ayivunyelwanga ukuba isetyenziswe nangubani na ongaphantsi kweminyaka emi-6 ubudala.
iziphumo zomlomo wejuvederm
Ndingayithatha njani i-oxaprozin?
Landela yonke imikhombandlela kwileyibhile yakho yonyango kwaye ufunde zonke izikhokelo zamayeza. Ugqirha wakho ngamanye amaxesha unokutshintsha idosi yakho. Sebenzisa elonaqondo lisezantsi elisebenzayo ekunyangeni imeko yakho.
Iidosi ze-Oxaprozin zisekwe kubunzima (ngakumbi kubantwana nakwishumi elivisayo). Izidingo zakho zedosi zingatshintsha ukuba ufumana okanye uncipha emzimbeni.
Ukuba usebenzisa i-oxaprozin ixesha elide, unokufuna iimvavanyo zonyango rhoqo.
Gcina i-oxaprozin kubushushu begumbi, kude ukufuma, ubushushu, kunye nokukhanya. Gcina ibhotile ivalwe ngokuqinileyo xa ingasetyenziswa.
Yintoni ekufuneka ndiyiphephe ngelixa ndithatha i-oxaprozin?
Gwema utywala. Ukusela kakhulu kunokunyusa umngcipheko wokuphuma kwesisu.
Gwema ukuthatha i-aspirin ngelixa uthatha i-oxaprozin.
Buza ugqirha okanye usokhemesti ngaphambi kokusebenzisa amanye amayeza entlungu, umkhuhlane, ukudumba, okanye iimpawu zomkhuhlane / umkhuhlane. Zingaqulatha izinto ezifana ne-oxaprozin (njenge-aspirin, ibuprofen , ketoprofen , okanye iqeqsha ).
I-Oxaprozin inokukwenza ukuba utshiswe lilanga ngokulula. Gwema ukukhanya kwelanga okanye iibhedi zokutshisa. Nxiba impahla yokukhusela kwaye usebenzise i-sunscreen (i-SPF 30 okanye ngaphezulu) xa ungaphandle.
Yintoni i-metronidazole esetyenziselwa ukunyanga
Iziphumo ebezingalindelekanga ze-Oxaprozin
Fumana uncedo lwezonyango olungxamisekileyo ukuba unayo iimpawu negazi lakho ( urhwebo , ukuthimla, ukuvuza okanye impumlo exineneyo, ukuvutha okanye ukuphefumla nzima, ukudumba ebusweni okanye emqaleni) okanye ulusu olunamandla (ifiva, umqala obuhkungu , Amehlo avuthayo, iintlungu zolusu, bomvu okanye mfusa irhashalala ngokudubula nokuxobuka).
Fumana uncedo lwezonyango olungxamisekileyo ukuba unayo iimpawu zesifo sentliziyo okanye ukubetha kwentliziyo: Intlungu yesifuba isasazeka kumhlathi okanye egxalabeni, ngequbuliso ukuba ndindisholo okanye ubuthathaka kwelinye icala lomzimba, intetho edibeneyo, ukuziva uphefumla kancinci.
Yeka ukusebenzisa i-oxaprozin kwaye ubize ugqirha ngokukhawuleza ukuba unayo:
irhashalala, nokuba ithambe kangakanani;
iingxaki zentliziyo - ukudumba, ukukhawuleza ukutyeba, ukuziva uphefumla kancinci;
iimpawu zokopha esiswini- igazi okanye ilindle, ukhohlela igazi okanye ukugabha okujongeka njengendawo yekofu;
iingxaki zesibindi-- isicaphucaphu , iintlungu esiswini, ukurhawuzelela, ukudinwa, iimpawu ezifana nomkhuhlane, ukungabinamdla wokutya, umchamo omnyama, izitulo ezinombala wodongwe, inyongo (ngatyheli kolusu okanye kwamehlo);
iingxaki zezintso -ukuchama kancinci okanye ukungabikho kwaphela, ukudumba iinyawo zakho okanye amaqatha, ukuziva udiniwe okanye uphefumla kancinci; okanye
iiseli ezibomvu zegazi (i-anemia) - ulusu olumhlophe, ukudinwa okungaqhelekanga, ukuziva ukhaphukhaphu okanye uphefumla kancinci, izandla ezibandayo kunye neenyawo.
isicaphucaphu, isisu esimoshakele ;
urhudo , ukuqhina ; okanye
Iziphumo ebezingalindelekanga zexesha elide ze-benadryl
Zeziphi ezinye iziyobisi ezichaphazela i-oxaprozin?
Buza ugqirha wakho ngaphambi kokusebenzisa i-oxaprozin ukuba uthatha i-anti-depressant. Ukuthatha ezithile iziyobisi nge-NSAID kunokubangela ukuba ukruneke okanye wophe ngokulula.
igazi elincinci ( iwarfarin , Coumadin , EJantoven);
intliziyo okanye amayeza oxinzelelo lwegazi, kubandakanya umchamo okanye 'ipilisi yamanzi'; okanye
iyeza le-steroid (njenge ubume ).
Olu luhlu alugqitywanga. Amanye amachiza anokuchaphazela i-oxaprozin, kubandakanya amayeza kunye namayeza e-counter, iivithamini , kunye iimveliso zemifuno . Ayizizo zonke iindlela zokunxibelelana kweziyobisi ezidweliswe apha.
Ngaba i-Oxaprozin iyasebenzisana nezinye iziyobisi?
Ilungelo lokushicilela 1996-2021 Cerner Multum, Inc. Inguqulelo: 11.01.
isifo se-osgood-schlatter kubantu abadala
I-glipizide 5 mg ithebhulethi
Ndingathatha i-40mg ye-cialis
Iziphumo zexesha elide ze-prilosec
Uluhlu lwamayeza okurhoxisa utywala
indlela yokwenza mnyama ngepende